ड्राइभिङ लाइसेन्स हराउँदा घर नै अर्काको नाममा पास ! « News24 : Premium News Channel
ड्राइभिङ लाइसेन्स हराउँदा घर नै अर्काको नाममा पास !
एजेन्सी । बेलायतका एक व्यक्तिको घर चोरी भएको छ ।
जब मालिक रेभरेन्ड माइक हललाई उनका छिमेकीहरूले यसबारे बताए, उनी लुटन शहरमा रहेको आफ्नो घर फर्किए। त्यहाँ उनले आफ्नो घरमा काम चलिरहेको देखे । त्यहाँ उपस्थित एक व्यक्तिले यो घर अहिले आफ्नो हो, यो घरको मालिक हो भनेर दाबी गरिरहेका छन्।
बीबीसीले यस विषयमा अनुसन्धान गर्‍यो र यो पहिचान चोरीको मामला रहेको बताएको छ। माइक हलको पहिचान चोरी भयो र उनको घर बेचियो र बैंकबाट पैसा उडाइएको थियो। प्रहरीले सुरुमा यो ठगीको घटना नभएको बताए पनि अहिले अनुसन्धान भइरहेको छ ।
उक्त घरका मालिक माइक हल त्यहाँ बस्दैनन्, उनी कामको लागि नर्थ वेल्समा बस्छन्। उनलाई अगस्ट २० मा छिमेकीले फोन गरेर आफ्नो घरमा कोही रहेको र बत्ती बलेको बताए । भोलिपल्टै उनी त्यहाँ पुगे ।
उनले बीबीसी रेडियो ४ को कार्यक्रम ‘तिमी र तिम्रो’ मा भने, ‘मैले ढोका खोल्ने प्रयास गरेँ, तर खुलेन । त्यसपछि एउटा मानिसले ढोका खोल्यो। म उसलाई धकेलेर भित्र गएँ, मलाई थाहा थिएन उ त्यहाँ के गरिरहेको थियो। भित्रको अवस्था देखेर म छक्क परें, फर्निचर, कार्पेट, पर्दा–केही थिएन ।’
उक्त व्यक्तिले आफू निर्माण व्यवसायी भएको र काम गरिरहेको बताए, जसलाई माइक हलले भने, ‘मैले यो घर बेचेको होइन । यो मेरो घर हो।’
त्यसपछि उनले प्रहरीलाई बोलाए । तर निर्माणकर्ता त्यहाँबाट गएर नयाँ घरधनीका बुवालाई ल्याए जसले साउनमा यो घर किनेको र अहिले आफ्नो घर भएको बताए ।
‘हामीले त्यसपछि रजिस्ट्रीको रेकर्ड अनलाइन खोज्यौं, र त्यहाँ अगस्त ४ मा वास्तवमा त्यहाँ अरू कसैको नाम थियो,’ माइक हलले भने।
‘त्यसपछि प्रहरीले भने, हामी अहिले केही गर्न सक्दैनौं, यो कानूनी कुरा हो, तपाईं गएर आफ्ना वकिलहरूसँग कुरा गर्नुपर्छ।’
‘त्यहाँ मेरो लागि अझ ठूलो धक्का थियो । एउटा म पहिले नै मेरो घरको अवस्था देखेर स्तब्ध भएँ । तर जब मैले पुलिसले यो फौजदारी मुद्दा होइन भनेर भनेको सुनें, म विश्वास गर्न सकिन।’
त्यसपछि बीबीसीले माइक हललाई स्थानीय बेडफोर्डशायर प्रहरीसँग सम्पर्क गर्‍यो, जसले अब अनुसन्धान सुरु गरेको छ। प्रहरी प्रवक्ताले अहिलेसम्म कसैलाई पनि पक्राउ नगरेको बताए ।
तपाईं र तपाईंको माइक हलको पहिचान चोरी भएको ड्राइभिङ इजाजतपत्र बरामद भएको छ। यससंगै उनको बैंक खाताको विवरण पनि प्राप्त भएको छ, जसमा घर बिक्रीको रकम जम्मा भएको छ, घर चोरीसंग सम्बन्धित फोन रेकर्डिङ पनि प्राप्त भएको छ ।
एक करोड ३१ लाखमा घर बिक्री
१ लाख ३१ हजार पाउण्ड अर्थात करिब एक करोड ३१ लाख रुपैयाँमा बिक्री भएको घर अब कानूनी रूपमा नयाँ मालिकको घर भएको छ ।
घर बिक्रीसँग सम्बन्धित वकिलहरूले यो प्रहरी अनुसन्धानको विषय भएकाले अहिले नै यसबारे केही भन्न नसक्ने बताए ।
एक कानूनी फर्मले भने, ‘हामी प्रहरीलाई सहयोग गर्नेछौं र हाम्रो व्यावसायिक दायित्व पूरा गर्नेछौं।’ बीबीसीले फर्मको नाम खुलाउन नदिने निर्णय गरेको छ ।
बेलायतमा घर बिक्री र खरिद दर्ता गर्ने ल्याण्ड रजिस्ट्रीले गत वर्ष ठगी मुद्दामा ३.५ मिलियन पाउण्ड तिरेको थियो।
ल्यान्ड रजिस्ट्रीले भन्यो, ‘हामी पेशेवरहरूसँग काम गर्छौं र भर पर्छौं, जस्तै वकीलहरू, र जालसाजी घरमालिकता प्रयासहरू पत्ता लगाउने अनुसन्धानहरू।’
तर हाम्रो प्रयासपछि पनि हरेक वर्ष कुनै न कुनै ठगीका मुद्दा दर्ता हुन्छन् ।